Soisa - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Suisse
Ahoana ny fomba fangatahana visa any Switzerland Schengen?
Febroary 8, 2021 Shubham Sharma Soisa, visa ho
Handeha any Soisa ve ianao? Tsy maintsy mangataka visa aloha ianao handehanana any Suisse. Mila mangataka visa Schengen ny olona iray hitsidika an'i Soisa. Ity antontan-taratasy visa ity dia hanome anao fidirana amin'ny Schengen
Banks tsara indrindra any Soisa
Enga anie 17, 2020 Shubham Sharma ny vola, Soisa
Ny sehatry ny banky any Suisse dia mivelatra be. Soisa ny iray amin'ireo rafi-bola tsara indrindra eto an-tany. Ny rafitra fitahirizam-bolan'izy ireo dia manana habe lehibe, fifantohana amin'ny orinasam-pifandraisana. Ny banky afovoan'i Soisa dia
Ahoana ny fomba hahazoana Asylum any Suisse
Enga anie 14, 2020 Shubham Sharma mpitsoa-ponenana, Soisa
Tsy misy isalasalana fa tsara tarehy Soisa, ary mahasarika mpizahatany erak'izao tontolo izao. Na dia mandeha any Suisse aza ianao dia afaka mangataka fialokalofana any. Misy fomba fanao mety tokony harahinao raha mila izany ianao
Serivisy fahasalamana tsara indrindra na hopitaly any Switzerland !!
Enga anie 6, 2020 Shubham Sharma fahasalamana, Soisa
Fitsidihana an'i Suisse, ity misy torolàlana fizaran-taona
Novambra 20, 2019 Shubham Sharma Soisa
Ny fitsangatsanganana any Soisa dia manolotra hatsaran-tarehy voajanahary tsy manam-paharoa sy fitsangatsanganana na inona na inona rehefa mitsidika ianao. Mifanelanelan'ny Tendrombohitra Alps sy Jura, ny tanànan'i alpine dia feno tanàna manentana, tany maro be ary asa mahaliana. Miaraka amin'ireo topografika miavaka manerana ny faritra
Fitaterana tsara indrindra sy lafo indrindra any Switzerland
Novambra 20, 2019 Shubham Sharma mandehana, Soisa
Manana tamba-jotra feno lalamby sy lalamby i Switzerland. Ny tambajotram-pitateram-bahoaka dia manana lavan'ny 24,500 2600 kilometatra ary manana fiantsonana XNUMX ary fijanonana. Ny tamba-jotra Soisa dia mamatsy vola ny saran-dalana sy ny hetra amin'ny fiara.
Trano fandraisam-bola tsara indrindra any Suisse
Novambra 19, 2019 Shubham Sharma trano fandraisam-bahiny, Soisa
Anisan'ny tanàna tsara tarehy indrindra i Soisa ary iray amin'ireo tanàna tsara indrindra hipetrahana. Ny renivohitr'i Soisa any Geneva dia iray amin'ireo tanàna lafo vidy indrindra eto an-tany. Tsy mitondra ilay teny hoe 'trano fandraisam-bola' izany